व्यावसायिक कृषि कर्ममा कैलालीका महिला, प्याजको बेर्ना बेचेर मनग्य आम्दानी ! – Sodhpatra
व्यावसायिक कृषि कर्ममा कैलालीका महिला, प्याजको बेर्ना बेचेर मनग्य आम्दानी !
प्रकाशित : १३ माघ २०७७, मंगलवार १२:५१ January 26, 2021
टीकापुर : व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि काममा लागे सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कैलालीका कृषिकर्ममा लागेका महिलाले पुष्टि गरेका छन् । कैलालीका किसान महिलाले यतिखेर तरकारी प्याजका बेर्ना बेचेर राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने कृषि पेशाअन्तर्गत तरकारीको बेर्ना उत्पादन पनि हो । तरकारीका बेर्ना उत्पादनमा भविष्य देखेपछि यसमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
व्यावसायिकरूपमा बेर्ना उत्पादन गर्ने उनले अहिले दैनिक नर्सरीबाटै २५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेर्ना बेचिरहेकी छिन् । वनगाउँ र घियागाउँका दुई स्थानमा गरी सात कठ्ठा क्षेत्रफलमा प्याजको बेर्ना उत्पादन गरिरहेकी छिन् । अहिलेसम्म करिब ३० क्विन्टल प्याजको बेर्ना बेचिसकेकी छिन् । कृष्णामतीले यो सिजनमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँका बेर्ना बिक्री गरेकी हुन् । “अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष प्याजको बेर्नाको बिक्री राम्रो भइरहेको छ । यस वर्ष आम्दानी पनि राम्रै भइरहेको छ”, उनले भनिन्, “बेर्ना बिक्री गर्ने सिजनमा महिनामा तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ ।”
विगतका वर्षमा सहज र सस्तोरूपमा सीमा नाकाबाट प्याजको बीउ नेपाली बजारमा आउने गर्दथ्यो तर यस वर्ष सीमा नाकाबाट तरकारी बेर्ना आउन पाएका छैनन् । यसले नेपाली उत्पादकले बजार पाएको किसान बताउँछन् । “अन्य बेर्ना उत्पादनमा लगानी र मेहनत धेरै लाग्छ तर प्याजको बेर्ना उत्पादनमा कम मेहनत लाग्ने गर्दछ”, होसन्ना बेर्ना नर्सरीका सञ्चालक जयराम चौधरी भन्छन्, “सहज भएकाले प्याजका बेर्ना उत्पादन गरी बिक्री गरिहेका छौँ । हाम्रो पनि परिवारका सदस्यले काम गर्छन् । घरमै बसीबसी आम्दानी लिन सकिन्छ ।”